JOHN YUSUF NKWỤGHACHI 22.9B NAIRA, MKPỌRỌ AFỌ ISHIN
Previous IHE NKIRI NDỊ NKIRI NOLLYWOOD NA-ABATA NA HOLLYWOOD
Next €2M ỤGWỌ ỤTỤ ISI: XABI ALONSO NA-AKPATA EGO AFỌ ISE O JI
JOHN YUSUF ỤTA OHI MAKA NKWỤGHACHI N22.9B, MKPỌRỌ AFỌ ISHIN
John Yusuf, onye ohi ezumike nkpa nke afo ise gara aga, ikpe ziri ezi nke Justice Abubakar Talba nke ulo ikpe azu nke Federal Capital Territory, na-ezu ohi iji nweta ego ezumike nkita uwe ojii 32.8billion Naira, mechara nweta nkwado ya.
Ụlọikpe Mkpogharị nke Abuja na Wednesday jidere ya afọ isii ma rịọ ya ka ọ kwụrụ 22.9billion Naira.
Ikpe ziri ezi Talba kpebiri ya n’ụlọ mkpọrọ afọ abụọ, na nhọrọ nke ịkwụ ụgwọ nke N750,000. Ikpe ahụ kpatara iwe mba.
Mkpe ikpe nke ụlọikpe ikpe ahụ bụ njedebe nke arịrịọ ahụ nke Commission Economic Crime na Financial Critium, nke mere n’April 26, 2013 gakwuru ụlọ ikpe ikpe iji wepụ ikpe nke ụlọikpe dị ala.
Ebumnuche ise nke mkpesa ahụ, na-adabere n’igosi ezi uche nke Onye ikpe na ikpe ikpe nke onye ahụ jụrụ ajụjụ ahụ na-ekpe ikpe maka ụgwọ ọnụahịa atọ ahụ, bụ nke o kwetara na ọ na-atụgharị ihe karịrị nde N24 nke ụlọ ọrụ ndị uweojii na-akwụ ụgwọ ya. jiri.
EFCC jụrụ Ụlọikpe Mkpegharị ikpe ikpe “ma onye ikpe ikpe ọ gosipụtara ezi uche ya n’ụzọ ikpe ziri ezi na ikpe ziri ezi mgbe ọ kwenyere onye na-aza ajụjụ maka ụgwọ ọnụahịa atọ nke ntụgharị n3 billion megidere nkebi nke 309 nke Iwu Penal, Ọchịchị Ya mere ka afọ abụọ nọrọ mkpọrọ otu nhọrọ nke mma nke N250, 000 na nke ọ bụla n’ime atọ ndị ahụ “.
Ndị ọkàiwu Yosef na 10 June 2015 kpalitere ịma aka na ntinye aka nke mkpesa ahụ maka na ha kwetara na a gbara akwụkwọ edemede ahụ n’èzí n’agbanyeghị 90 ụbọchị, ya mere, na-emegide nke s. 24 (2) (b) nke Iwu Ụlọikpe Mkpegharị, 2010 (dịka a gbanwere) ma gbaa ya ume ka ụlọikpe ahụ wepụ ikpe ahụ.
Ndị ikpe nke Ụlọikpe Mkpegharị Mkpegharị, kpochapụrụ ihe mbụ na-ajụ na ihe kpatara ya; “Mgbe ị tụlere oge nhata nyere onwe gị ha abụọ, ajụjụ a ga-aza bụ ma ụbọchị ikpé nke ụlọ ikpe ahụ ga-etinye aka na nhazi nke ụbọchị 90 ụbọchị a ga-ede akwụkwọ maka ịrịọ arịrịọ?
“Na ụbọchị ikpe ikpe nke ụlọ ikpe ahụ ka a napụtara dị na 28 Jenụwarị, 2013, agaghị etinye aka na nhazi nke ụbọchị 90.
“Ebe ọ bụ na ụbọchị ụbọchị ikpé ahụ adịghị, ụbọchị 90 malitere ịmalite site na January 29, 2013 na 90 ụbọchị ga-ada na Sunday.
“Nke ahụ dịka s. 15 (2) nke Nkọwapụta Iwu CAP 123, ebe ụbọchị ikpe-azụ bụ ezumike, ọnụ ọgụgụ ahụ ga-anọgide ruo mgbe ngwụsị nke ụbọchị na – esote nke na – abụghị ezumike.
“Ebe ọ bụ na ụbọchị 90 bụ Sunday na omume nke s. 15 (5) nke Nkọwapụta Iwu, Sunday bụ ezumike, ụbọchị na – esote ụbọchị akwụkwọ ọkwa nke ịrịọ arịrịọ ka n’ime oge, n’ihi ya, mkpesa ahụ ruru eru ma nwekwaa ohere “.
N’ọchịchị na ihe gbasara ihe ndị ahụ, ndị ikpe nke Ụlọikpe Mkpegharị ikpe kwenyere na ndị isi atọ ahụ metụtara onye ahụ jụrụ ajụjụ (Kọmitii 17, 18 na 19) kwuru n’ụzọ doro anya ọnụahịa nke onye ahụ kpọrọ akwụkwọ kwuru na onye ahụ jụrụ ajụjụ gbanwere maka iji onwe ya. Onye na-aza ajụjụ ahụ rịọrọ ndị ikpe atọ ahụ ikpe ma si otú a kwere na ntụgharị nchịkọta nchịkọta ihe dị ka N24 billion iji mee ihe maka ya.
Ndị ọkàikpe ahụ kwuru na ikpe ụlọ ikpe ahụ, anaghị egbochi ma onye ikpe ma ndị ọzọ. N’ihi ya, ha na-ekwu na ikpe ahụ “ga – eme ka ọ bụrụ nke a ga – eme ka ọ ghara ịdị na –
* na Akaụntụ 17, a na-ama onye ikpe ahụ ikpe na mkpọrọ afọ abụọ na mgbakwunye nke mma nke N20 Nillion Naira;
* na Akaụntụ 18, a na-ama onye ikpe ahụ ikpe na mkpọrọ afọ abụọ na mgbakwunye nke mma nke 1.4billion Naira;
* na ọnụ ọgụgụ 19, a na-ama onye ikpe ahụ ikpe afọ abụọ n’ụlọ mkpọrọ na mgbakwunye nke mma nke nde Nrịka 1.5 “.
Mkpọrọ ụlọ mkpọrọ ahụ ga-aga n’ihu na nke ọma ga-ejikọta ọnụ.
N’ime mmepe yiri nke ahụ, Ụlọikpe Kasị Elu na March 9 kpochara arịrịọ ahụ site n’aka Onyia Ifeanyi, na-achọ ịkwanye nkwenye ya na ikpe ya ruo afọ 7 n’ụlọ mkpọrọ na November 28, 2013 site na Ụlọikpe Ukwu Federal Enugu, nke ikpe ziri ezi M.L. Shuaibu (dịka ọ dị n’oge ahụ) maka mmejọ nke inweta site na ụgha ụgha na ịnwe akwụkwọ ndị nwere ụgha ụgha.
N’ịbụ onye enweghị nkwenye siri ike, onye ahụ na-akpọ ndị ikpe rịọrọ ya na-ekpechite ọnụ ya na Ngalaba Ụlọikpe Enugu nke Ụlọikpe Mkpegharị Ikpe, nke kwadoro mkpebi ụlọ ikpe ahụ.
N’ịbụ onye enweghị afọ ojuju na mkpebi nke ikpe ụlọikpe, onye ikpe ahụ gara Ụlọikpe Kasị Elu. Ụlọikpe ikpe na – ekpe ikpe na March 9, kwupụtara mkpebi nke Ụlọikpe Mkpegharị
Isimbido ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV john johnyusuf LATEST money news tax yusuf